Deepika”waa wax dhib badan inaa hesho Ranver oo kale kaaso si dhab ah ku rumeysan naftisana taada ka hormarinayo” – Filimside.net
Deepika”waa wax dhib badan inaa hesho Ranver oo kale kaaso si dhab ah ku rumeysan naftisana taada ka hormarinayo”
Ranver Singh iyo Deepika Padukone waxay kamid yihiin lamaanaha Bollywoodka loogu jecelyahay kuwaaso xiriirkoda caan yahay daafaha caalamkana ku baahay waqtigaan.
Dhowaan waxay ka qeyb qaateen wareysi xiiso leh oo magaalada Delhi lagu qabtay labadoodana loogu talo galay wareysigaas in looga qaado waxaana in badan wax laga weydiyay shaqadooda iyo xiriirka noloshooda.
Lamaanahan waxaa la arkay sido kale xalay ayagoo waqti wada qaadanayaan oo magaalka casho u aadeen xili Ranver hooyadiisa xitaa la jirtay waxaa kaloo la sheegay in Ranver waalidiintisa wadi doono goor dhow Bangalore-na aadi doonan halkaas oo arooskoda lamaanahan lagu qaban qaabinaayo.
Hadaba Deepika waa haweeneyda bisha October lagu casuumay Cover-ka Magazine ama sawiradeeda ayaa Cover looga dhigay shabakada Magazine ayadoo sawiro xiiso leh laga qaadayey maalmahan.
Wareysi ayee siisay Magazine intii ay duubista sawirada Fashion-ka waday waxaana wax laga weydiyay saaxiibkeda ama lamaanaheeda Ranver Singh inee waxyar ka tilmaamto dabeecad ahaan iyo wanaagisa.
Waxay tiri iyadoo ka hadleysa Ranver,”waxaa jiraan dad aad noloshaada ku xireyso kuwaaso xiriir qoto dheer iyo kalsooni fara badan idinka dhaxeyso naftaadana ku aamini karto xaqiiq ahaan aniga iyo Ranver sidaas oo kale ayaa nahay.”
“Ranver oo kale in la helo wey adagtahay waa qof la rumeysan karo isagan si wanaagsan kuu rumeysanaayo waa qof naftiisa naftaada ka hormarinaayo baahi walba oo jirto run ahaanti amaan wuu ka dhan yahay Ranver.”